Weekend အရောင်းမြှင့်များအတွက်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ |
သာနယူးကစားသမား. 30x ကအာမခံလိုအပ်ချက်များကို, max ကိုကူးပြောင်း x4 သက်ဆိုင်. £ 10 မင်း. အပျငှေ. Selected Slot games only. T က & C ရဲ့ Apply.$€£5အခမဲ့ဆုကြေးငွေ Shamrock N ကို Roll ပေါ်သာပြ သ. ရ, မာယာ Marvell နှင့် Candy လဲလှယ်ရေး slot, ကလက်ခံရရှိရန်သင့်မိုဘိုင်းနံပါတ်မှတ်ပုံတင်ပြီးမှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြကျေးဇူးပြုပြီး.
သာနယူးကစားသမား. 30x ကအာမခံလိုအပ်ချက်များကို, max ကိုကူးပြောင်း x4 သက်ဆိုင်. £ 10 မင်း. အပျငှေ. သာ slot ဂိမ်း. T က&C's APPLY.$€£5အခမဲ့ဆုကြေးငွေ Shamrock N ကို Roll ပေါ်သာပြ သ. ရ, မာယာ Marvell နှင့် Candy လဲလှယ်ရေး slot, ကလက်ခံရရှိရန်သင့်မိုဘိုင်းနံပါတ်မှတ်ပုံတင်ပြီးမှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြကျေးဇူးပြုပြီး.
CHOOSE YOUR MATCH WEEKEND! စည်းကမ်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ
ဒီဆုကြေးငွေအကြားတက်ကြွဖြစ်လိမ့်မည် 00:01 နှင့် 23:59 on the following dates 7th – 9ဇူလိုင်လကြိမ်မြောက်, 14ကြိမ်မြောက် – 15ဇူလိုင်လကြိမ်မြောက်, 21st – 23တတိယအကြိမ်မြောက်, 28th – 30th July (BST)
BST ACST -9.30hrs ၏ညီမျှသည်, ဒီနည်းကို -1hr, PTZ + 8နာရီ
တစ်ဦးရရှိရန်£ 10 နိမ့်ဆုံးငွေသွင်း 50% match up to £25
အပိုဆုရန်ပုံငွေများ 30x ၏အာမခံလိုအပ်ချက်သင့်ရဲ့သိုက်နှင့်ဆုကြေးငွေပမာဏကိုများ၏ပေါင်းလဒ်သယ်ဆောင် (e.g. £ 10 သိုက် + £10 bonus x 30= £600) must be met before the bonus and any winnings are converted to capped cash and this and any further winnings become withdrawable.
အပိုဆုကြေးငွေအထိကြာနိုင်ပါတယ်3သင့်အကောင့်မှအသိအမှတ်ပြုခံရဖို့မြှင့်တင်ရေးရဲ့အဆုံးကနေအလုပ်လုပ်ရက်ပတ်လုံး.
ဒီမြှင့်တင်ရေးထံမှရရှိခဲ့ပြီးအပိုဆုရန်ပုံငွေများ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ slot ကဂိမ်းပေါ်မှာကစားရန်သာအသုံးပွုနိုငျ.
ဆုကြေးငွေရန်ပုံငွေကနေအများဆုံးကူးပြောင်းငွေပမာဏ 4X မှာချီးမြှင့်ဆုကြေးငွေပမာဏကိုမိနစ်မှာပါလိမ့်မည်. အာမခံပြီးပြည့်စုံသည်တစ်ချိန်ကအပိုဆုရန်ပုံငွေများငွေသားမှအလိုအလျှောက်ပြောင်း
ရီးရဲလ်ငွေဂိမ်းအပေါ်လုပ်သာလျှင်စီမံခန့်ခွဲရန်အအာမခံလိုအပ်ချက်ဆီသို့ဦးတည်အထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်. အခမဲ့ဂိမ်းများအတွက် Play စအပေါ်လုပ်အာမခံထိုအာမခံလိုအပ်ချက်ဆီသို့ဦးတည်ရေတွက်မည်မဟုတ်.
ပြီးတာနဲ့သင့်ရဲ့ဆုကြေးငွေများအတွက်တရားဝင်နေဆဲအသိအမှတ်ပြု 28 နေ့ရကျ. Bonus spins remain valid for7နေ့ရကျ. သငျသညျဤကာလအတွက်အာမခံလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်စွက်မထားသင့်, ကျန်ရှိသောဆုကြေးငွေရန်ပုံငွေများကိုသင့်အကောင့်မှဖယ်ရှားပစ်မည်.
အပိုဆုခရက်ဒစ်ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့်အောက်ပါဂိမ်းအပေါ်အသုံးပြုရနိုင်ရင်: Dracula, သေနတ် '' N ကို’ နှင်းဆီပန်း, လူးစ Hendrix, ဘုရားသခင့ Fortune မဂ္ဂဇင်း, အဆိုပါမမြင်နိုင်သောက Man, လီယိုပတ်ထ MegaJackpot, ဆိုက်ဘေးရီးယားမုန်တိုင်း Megajackpot, Megajackpots ကျွန်း O'Plenty, Wolf က Run ကို Megajackpot, ကြယ်ပွင့်မီးအိမ် Megajackpot, Gong Xi Fa Cai, ပိုများသောမျောက်များကြယ်ထီပေါက်, Genie ထီပေါက်, Winstar, တရားမျှတမှုအဖွဲ့ချုပ်, Batman, က Superman, အဆိုပါ Flash ကို, Green Lantern, Holly Madison နှင့်အတူတစ်ဦးညနေခင်း, Psycho, ဂျိမ်းစ်ဒင်း, အဆိုပါဝက် Wizard ကို, Thunderstruck II ကို, Avalon, ခရီးစဉ်အပေါ် Fortune မဂ္ဂဇင်း၏ဘီး, ချန်ပီယံ Raceways, slot အိုရွှေ, စူပါတိုးတက်မှုနှုန်း, စူပါစိန် Deluxe, worms, ထိပ်တန်းကြောင်, 100K သည်ပိရမစ်, Black ကမုဆိုးမ, မိသားစု Guy, Ghostbusters, hot Rolls စူပါ Times သတင်းစာ Pay ကို, အန္တရာယ်, ကံကောင်း Larry Lobstermania 2, နောဧရဲ့သေတ္တာ, ရှားလော့ဟုမျး: Blackwood များအတွက် Hunt က, အနောက်တိုင်းခေါင်းလောင်း, Fortune မဂ္ဂဇင်း Triple လွန်ကဲလည်၏ဘီး, Fortune မဂ္ဂဇင်း၏ဘီး: ultra5ရက်ကြောင့်မှားယွင်း, Ted
ကစားသမားတစ်ဦးတည်းသာဆုကြေးငွေတစုံတယောက်သောသူသည်အချိန်မှာတက်ကြွဖြစ်နိုင်သည်ကိုသတိပေးနေကြပါတယ်, သွားပါကျေးဇူးပြုပြီး “ပရိုဖိုင်းကို” သင့်ရဲ့တစျခုလုံးကိုဆုကြေးငွေတန်းစီကြည့်ရှုရန်အပိုင်း
စံ စည်းကမ်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ လျှောက်ထား.
ထိုသို့မြှင့်တင်ရေးစော်ကားခဲ့ပြီးနှင့် / သို့မဟုတ်ကမ်းလှမ်းမှုကို၏စည်းကမ်းချက်များမပြည့်စုံကြသည်မဟုတ်ဘယ်မှာယုံကြည်သည်ဆိုပါကစီမံခန့်ခွဲမှုမဆိုမြှင့်တင်ရေးငွေပေးချေမှုမပြောဘဲရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်.
စီမံခန့်ခွဲမှုကိုပယ်ဖျက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်, မဆိုယှဉ်ပြိုင်မှုသို့မဟုတ်မြှင့်တင်ရေးကိုရပ်ဆိုင်းသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲ (သိ. သို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို) မည်သည့်အချိန်တွင်နှင့်ကြိုတင်သတိပေးချက်မပါဘဲ.
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အအခြေအနေ – အင်္ဂါနေ့ပွဲစဉ် & ချည်ငင်
ဟယ်လိုဝင်းလှည့်ဖျား Drop စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အအခြေအနေ
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အအခြေအနေ – အပိုဆုလှည့်ဖျားကြာသပတေး…
စည်းကမ်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ – အင်္ဂါနေ့ပွဲစဉ်